Sina Varavarana fefy vy vita amin'ny metaly ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy mari-trano | Pro Fefy
Tontonana fefy vita amin'ny vy vita amin'ny metaly ho an'ny fampiharana aritrano
Raha tsy te-hiseho endrika misavoritaka ianao ary hikaroka fefy manintona sy manintona dia manome lanja tsara ho an'ny fanananao, ity fefy vy vita amin'ny metaly ity dia fefy mety indrindra. Izy io dia atambatra amin'ny ravina perforated sy vy metaly toradroa ho mora, tsotra ary mazava ny hametraka.
Ny ravina perforated dia ny vy metaly izay totohondry mekanika hamorona lamina loaka maro. Sarotra ny mikapoka raha resaka fencing. Ny fefy ravina metaly perforated dia manana habaka manokana sy endrika manintona raha oharina amin'ny fefy vy tariby.
PRO.Fence dia manome fefy vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy ary vita amin'ny vovoka mifono. Ny tanjaky ny vy sy ny lanjany dia mahatonga azy ho mendrika amin'ny fefy fiarovana. Ary vita amin'ny vovoka mifono dia manaova loko isan-karazany hamaly ny filanao haingo isan-karazany. Afa-tsy ny fampiasana fefy, ny takelaka metaly perforated dia manana karazana fampiharana marobe amin'ny tetik'asa fananganana, ao anatin'izany ny rindrina akustika sy ny valindrihana valin-drihana, ny tontolon'ny rindrina, ny tara-masoandro ary ny vavahady ary ny fampiasana maro hafa. Miaraka amin'ny safidinao lehibe kokoa ny modely perforated, ny takelaka metaly perforated dia lasa malaza kokoa amin'ny endrika amam-bika fanaingoana sy ny famaritana.
Ny firakotra vy vita amin'ny perforated dia vokatra misy tanjona ary manana fampiharana isan-karazany. Azo ampiasaina amin'ny fananganana valindrihana, tohatra, lavarangana, fonony miaro ho an'ny milina. Izy io koa dia azo zahana amin'ny fefy ary ampiasaina ho toy ny fiarovana sy fiarovana ho an'ny fanananao.
Ny hatevin'ny tontonana: 1.2mm
Haben'ny tontonana: H600-2000mm × W2000mm
Paositra: 50 × 50 × 1.5mm
Vita: vovoka mifono
1) Fahamarinana sy fahombiazana
Ny milina mandroso azontsika atao dia afaka manamboatra marindrano vy perforated amin'ny refy namboarina mba hiantohana ny takelaka hanome fahafaham-po ny filanao ary hifanaraka tsara amin'ny tranokala.
Azontsika atao ny manome tontonana perforated amin'ny lamina isan-karazany ao anatin'izany ny lavaka boribory, lavaka toradroa, loaka slotted ary koa manome azy amin'ny loko maro samihafa. Afaka handravaka sy manampy firavaka manokana ho an'ny fanananao izy io.
3) Serivisy maharitra
Ny fefy vy metaly no vahaolana tsara indrindra raha mitady fefy tsara amin'ny fanoherana ny harafesina ary maharitra mandritra ny fotoana maharitra. PRO.Fence dia nanao azy tamin'ny takelaka metaly nandrisika ary vita tamin'ny vovoka elektrostatika nopetahany antoka mba hanomezana tolotra maharitra maharitra.
Item TSY: PRO-13 Fotoana fitarihana: 15-21 ANDRO Orginan'ny vokatra: CHINA
Teo aloha: Fehin-tsarimihetsika BRC miorina amin'ny fefy maritrano
Manaraka: M-fefy fefy vy mifono vy mifono vy ho an'ny zavamaniry an'ny masoandro
Fefy vy nandrisika
L miendrika fefy vy tariby fefy ho an'ny mpanao mari-trano ...